Useyisikhulu esiphezulu kwaVodacom owayenguNgqongqoshe | isiZulu
Ukhale ngaphansi uVodacom kolukaPlease Call Me
Johannesburg – Lowo owayenguSekela Ngqongqoshe wezeziMali kuzwelonke, uJabu Moleketi, useqokwe njengoSihlalo omusha wesikhondlakhondla senkampani yezokuxhumana, uVodacom, nokuyisikhundla azoqala ukusiphatha kusukela maphakathi noJulayi.
UVodacom umemezele ngoLwesine ekuseni ukuthi uMoleketi, okuyimanje uyi-Independent non-Executive Director kule nkampani yezokuxhumana yaseNingizimu Afrika, uzoqala kulesi sikhundla ngomhlaka-19 kuJulayi.
Ngale kokuba nguSekela Ngqongqoshe wezeziMali, waphinde waba nguNgqongqoshe wezeziMali kanye nezoMnotho eGauteng.
Useke waba semabhodini ahlukene ezinkampani okubalwa kuzo iMMI Holdings kanye nenkampani yokutshala imali, iBrait. aphinde wahlala nasebhodini le-FIFA 2010 World Cup Local Organising Committee.
UMoleketi uvala isikhala sikaPeter Moyo, nozobeka phansi izintambo ebhodini lakwaVodacom emhlanganweni waminyaka yonke wale nkampani ngomhlaka-18 kuJulayi. UMoyo usezojoyina isikhondlakhondla senkampani yezezimali,u-Old Mutual, nalapho ezophatha khona isikhundla sokuba yi-CEO of Emerging Markets.
UVodacom uphinde wamemezela nokuthi usomabhizinisi odumile, uSaki Macozoma, uzoqala njenge-Lead Independent Director yale nkampani ngosuku olufanayo. Kuyimanje uMacozoma unguSihlalo weSafika Holdings, iTshipi é Ntle kanye neNtsimbintle Mining. Uphinde abe nguMqondisi wesikhondlakhondla senkampani yezimoto, iVolkswagen South Africa.
Ngale kwalokho, uMacozoma wayenguSihlalo weLiberty Life Holdings, uSihlalo weStandard Bank kanjalo noMengameli weBusiness Leadership South Africa.